"बाथ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"बाथ" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
बाथ (सम्पादन गर्ने)
०५:२२, २६ अक्टोबर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन
५२ bytes added , १० वर्ष अघि
unicodifying, added wikify tag
२०:०५, १२ अक्टोबर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
०५:२२, २६ अक्टोबर २०११ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
सा (unicodifying, added wikify tag)
बाथ रोग भन्नाले शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग भन्ने बुझिन्छ । बाथ रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका बाथले विभिन्न लक्षण देखाउँछन् । तर सबैजसो बाथ रोगमा सामान्यतया देखिने लक्षण भनेको जोर्नी दुख्नु तथा सुनिनु हो ।▼
▲'''बाथ''' रोग भन्नाले शरीरको रोग निरोधक शक्तिले आफ्नै शरीरको अंगलाई असर गरेर हुने रोग भन्ने बुझिन्छ । बाथ रोग धेरै प्रकारका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारका बाथले विभिन्न लक्षण देखाउँछन् । तर सबैजसो बाथ रोगमा सामान्यतया देखिने लक्षण भनेको जोर्नी दुख्नु तथा सुनिनु हो ।
सयभन्दा बढी प्रकारका बाथ रोगहरूमध्ये गठिया बाथ अथवा प्यालोटोइड आथर्राइटिस सबैभन्दा धेरै देखिने बाथ हो । गठिया बाथले मुख्यतया हात तथा खुट्टाका साना जोर्नीलाई असर गर्छ । यसले २० देखि ५० वर्षका महिलालाई ज्यादा असर गर्ने देखिए तापनि बालकदेखि वृद्ध, महिला तथा पुरुष सबैलाई यसले समात्न सक्छ ।
*औषधिः बाथ रोगको उपचार सबैभन्दा प्रभावशाली तब हुन्छ जब यसको सही पहिचान पहिले नै गर्न सकिन्छ । जोर्नीमा बिगार सुरु भएपछि उपचार कठिन हुन सक्छ । बाथ रोगको उपचारमा दुई प्रकारको औषधिको प्रमुख भूमिका रहन्छः
**(क) नदुख्ने औषधि तथा स्टेरोइडः यी औषधिले बाथको दुखाइ तथा सुन्निनेबाट चाँडै आराम दिलाउँछ । उपचारको सुरुवातमा यस्ता दबाइको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर केवल नदुख्ने दबाइ अथवा स्टेरोइडको प्रयोग गर्नाले नकारात्मक असर भने पर्न सक्छ । यस्ता दबाइ सधैं सकेसम्म कम मात्रामा तथा सधैं बाथ रोक्ने औषधिसँग मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रेड्निसोलोन मेड्रोल, डेक्सोना नामक दबाइ स्टेरोइड औषधिहरू हुन् ।
**(ख) बाथ रोक्ने औषधिः यसप्रकारका दबाइले बाथ रोगका असर तथा यसले जोर्नी खराब गर्ने क्रमलाई रोक्ने गर्छ । यी दबाइहरूले बिस्तारै मात्र काम गर्छन् र उपचारको सुरुवातमा यिनीहरूलाई धेरैजसो स्टेरोइडका साथमा दिइन्छ । यी औषधिहरू कडा हुने हुनाले यसको सेवनपश्चात बेलाबेलामा रगत जाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । मेथोट्रेक्सेट लैफ्नोनामाइड, सल्फासालाजिन आदि औषधि यसका उदाहरण हुन् । नयाँ एकदम असरदार तर एकदम महँगो दबाइ (जस्तैः रिडक्सिभ्याव) अब नेपालमा पनि पाउन थालेको छ ।
***व्यायामः सही व्यायामले जोर्नी अररो हुने र बांगिनबाट रोक्न मद्दत गर्छ साथै बांगिई नसकेको जोर्नीलाई कुशल रूपमा प्रयोगमा ल्याउन पनि व्यायामको आवश्यकता पर्छ ।
***शल्यक्रियाः बांगिसकेको र बिगि्रसकेको जोर्नी भने औषधिले पनि ठीक हुँदैन । यस्ता जोर्नीको शल्यक्रियाद्वारा उपचार गरिन्छ । यस्तो शल्यक्रिया हाडजोर्नी रोगविशेषज्ञले गर्छन् ।
दुखाइरहित जीवन र समयमै जोर्नीको बचाउ गरेर कुजिएको जीवन आउन नदिनु नै बाथ रोग उपचारको प्रमुख लक्ष्य हो । साथै, हानिकारक नदुख्ने दबाइको प्रयोगबाट रोक्न पनि यस्तो रोगको उपचार लक्ष्य हुन सक्छ ।
*[[http://www.ekantipur.com/np/2068/6/25/full-story/336910.html]]-बाथ रोग र उपचार :डा. विनीत वैद्य▼
▲*[[http://www.ekantipur.com/np/2068/6/25/full-story/336910.html]]-बाथ रोग र उपचार :डा. विनीत वैद्य
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/181700" बाट अनुप्रेषित